शरद ऋतु - सुनको समय, सबै कुरा पहेंलो र कागति रंग मा चित्रित छ मात्र कारण चमकता र आँखा को अल्पकालिक शोभा delighting glows। प्रकृति आफ्नो प्रशस्त मानिसहरूलाई endow गर्न खोज्छ, विशेष गरी यदि शरद ऋतु बाली फल र तरकारी गर्न उदार। किनभने उनको उपहार र जाडो लागि मात्र होइन आपूर्ति, तर पनि सबै भन्दा रोचक शिल्प गर्न सकिन्छ। जो आफ्नो प्रियजनलाई जवान छोराछोरीलाई प्रसन्न हुनेछ चकित हुनेछ। र अझै आफ्नो बच्चा स्कूल वा किंडरगार्टन प्रतियोगिताहरु लागि शिल्प बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले, आफ्नो शौक पनि उपयोगी हुनेछ, र परिवार एकजुट। आखिर, परिचित बनाउन कसरी रोचक विशेष केहि वस्तुहरू!
तपाईं तरकारी को संरचना को एक विचार थियो भने, पाठ्यक्रम, तपाईं यसलाई विस्तार विचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि सबै महत्त्वपूर्ण छ: रंग, तरकारी को आकार, आफ्नो अनुकूलता। र तिनीहरूले कसरी लामो आफ्नो दिन लायक उपस्थिति राख्न सक्नुहुन्छ। को प्रदर्शनी पछि देखाउन गर्दा, यो खान हुन सक्छ संरचना को undoubted फाइदा यसको व्यावहारिक उपयोगिता हुनेछ। तर, यो आफ्नो सिर्जना मा कम से कम एक दिन मन पराउँछु गर्न सक्ने मनमोहक छ।
उदाहरणको लागि, बैगुन। तिनीहरूलाई को नाम अन्तर्गत तरकारी को मूल संरचना प्राप्त गर्न सक्छन् "पेंगुइन को परिवार।" तपाईं के आवश्यक: दाग वा क्षति बिना 5-6 Sinenky विभिन्न आकार र तीव्र गाढा रंग, सधैं हरियो पुच्छर संग। काउली धेरै ठूलो inflorescence वा टाउको को एक जोडी साधारण बन्दागोभी। बैगुन संग तरकारी हाम्रो संरचना को तयारी प्रक्रिया सुरु। यो beaks हुनेछ, आफ्नो पुच्छर को सुझाव तिखार्ने। चक्कु ध्यान तिनीहरूलाई मा कटौती, जहाँ तपाईं एउटा सानो अँध्यारो-आँखा बटन सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ बनाउन। प्यारा तरकारी "पेंगुइन परिवार" तयार को वर्ण संरचना सामना। अब स्तन र भुँडी चिनो, छील टेप आफ्नो beaks अन्तर्गत सम्पूर्ण तरकारी साथ, राउन्ड को विपरीत अन्त कब्जा हटाउन। यस पक्षलाई एक पेन्गुइन पखेटा जस्तै उनको उठाने, छाला मा कटौती बनाउन। तरकारी को कि बैगुन संरचना, आफ्नै हातले बनाएको त्यसैले, छाला बिना शरीर darkened छैन सिरका यसलाई हटाउन। त्यसपछि आफ्नो पुरा दिन पेंगुइन बस वास्तविक कुरा जस्तै हिउँ-सेतो छाती र bellies खेल हुनेछ। ठूलो ट्रे लिनुहोस्। यो सुरम्य आकृति मा चित्रा समाधान। फैलाउन सेतो racemes snowdrifts जस्तै काउली। र परिणाम संग रमाइलो! र आफ्नो बच्चाहरु आफ्नो हातले तरकारी को संरचना जस्तै हस्तशिल्प, को किंडरगार्टन वा स्कूलमा सिक्न भने, उनीहरूले शायद प्रतियोगिता पुरस्कार मा हुनेछ।
तरकारी - रचनात्मकता र आत्म-अभिव्यक्ति लागि आश्चर्यजनक उर्वर सामाग्री, पनि ती tinkering गर्न मोडेलिंग कौशल, woodcarving, आदि छैन विशेष कलात्मक प्रतिभा संग endowed छन् नगर्ने, वा बस, तपाईं अलिकति कल्पना आवश्यकता हो, र यो कम्तिमा एउटा सानो डिग्री छ .. सबैलाई। र यदि तपाईं तरकारी को एक आकर्षक संरचना आफ्नो हात संग आउन र आफ्नो परिवारका साथ हुन, त्यसपछि तपाईं मूल साधारण शौक हुनेछ। छैन यसलाई ठूलो छ? तर फिर्ता मास्टर कक्षाहरू गर्न। जो मा खुरचना भेडा घुम्रेको belorunnye नरम Emerald घाँस संग रसीला Meadows कल्पना गर्नुहोस्। तपाईं यस अद्भुत pastoral गाह्रो तरकारी को शिल्प प्रयोग पुन: सिर्जना गर्न लाग्छ? लेख र चरण चरण निर्देशनहरूको गरेर फोटो अन्यथा तपाईं साबित हुनेछ! आखिर, यो केही बन्दागोभी टाउको को संरचना र खुट्टा संग नै च्याउ लागि आवश्यक छ, साग र डिल, फोम वा गत्ता को पातलो पाना को बन्डलहरूको।
का मुख्य तत्व सुरु गरौँ तरकारी बनेको हस्तशिल्प तपाईं जस्तै, भेडा वा पाठाहरूलाई - (फोटो संलग्न)। हामी खुट्टा को भूमिका निर्वाह गर्नेछ जो समान रूप cuttings बन्दागोभी, कट। पाठाहरू पनि Meadow मा खुरचना पर्छ! Fungi मा, टोपी नजिक को खुट्टा काट, त्यसैले तिनीहरू भेडा अनुहारहरू जस्तै थिए। यस अगाडि को भित्र जो आँखा को नकल गर्न सक्छन् म्याचको मद्दत संग बन्दागोभी को टाउको गर्न मशरूम संलग्न गर्नुहोस्। एक घुम्रेको inflorescences एकदम कर्ल ऊन लागि धमकना। एउटै मेल खाने वा Toothpicks को मद्दतले प्रत्येक पाठो फोम कस्नु गर्न। अब पानामा, जो greenery को समूह sprigs मा सम्मिलित एक प्वाल बनाउन। एक वास्तविक स्विस idyll - यहाँ तपाईं र हामी एक अद्भुत Meadow भयो!
रंगीन र सरल गीत को तरकारी को "पतन" विद्यार्थी प्रतियोगिताहरु, सामान्यतया जुनियर र मध्यम वर्गहरू को विद्यार्थी बीच विद्यालयमा आयोजित छन् जसको लागि गर्न सकिन्छ। तपाईं पहिल्यै भएको प्रतियोगिता लागि तयार भने, हप्ता 2, विचार यो प्रस्तावित। धेरै ठूलो कद्दू, प्राथमिकताको को brightest रंग लिनुहोस्। यो सम्पूर्ण कोर बाहिर खोक्रो त केवल पाप्रो-कचौरा कि आवश्यक छ देखि। यो सुक्खा र आधार प्राप्त "प्रशस्त को टोकरी।" अब यसलाई सानो छ। विलो शाखा को ह्यान्डल, उनको टाउको मा बुनाई braids को प्रविधी प्रयोग गर्न सक्छन्। एक तार संग सुरक्षित। र त्यसपछि एकदम सरल। को टोकरी मा सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ! स्ट्रिप zucchini, zelenoglavaya बन्दागोभी, रसीला पात, रातो र पहेंलो टमाटर, रंग घण्टी खुर्सानी, बैजनी बैगुन संग सुन्तला गाजर - शरद ऋतु यी सबै उपहार तपाईँको किनमेल गाडी ठाउँ हुनेछ। फल र तरकारी को मिश्रित संरचना प्रयोग गरेर को विचार, अङ्गुर, गुलाबी स्याउ र सुनको नाशपाती को लक्जरी गुच्छा अझै पनि जीवन शोभा पूरक र आफ्नो मातृभूमि को उर्वर माटो बारेमा विस्तृत कुरा भने। त्यसैले, आफ्नो रचनात्मकता को देशभक्ति भावना बारेमा थप भन्नेछु।
वाह ककडी र सार्क
प्रयोग फरक शिल्प, तरकारी को संरचना, सोच associative लिंक। कसले, उदाहरणका लागि, तपाईं एक ककडी सम्बद्ध? निस्सन्देह, हरियो भ्यागुतो-वाह र crocodiles संग। र पनि शार्क संग! प्यारा साना जनावर आफ्नो जवान छोराछोरीको आनन्द को एक आँधी कारण, र तिनीहरूले भोक समस्या छ भने पनि, एक मनपरेको धेरै विश्वास बिना तिनीहरू सहमत तरकारी खान। हामी कहाँ सुरु गर्छन्? एक प्लेट मा बन्दागोभी पात राख्नु। केही साना खीरे लिनुहोस्। एउटा ठूलो र एउटा सानो:2मा crosswise प्रत्येक आधा कटौती। सानो फेरि आधा विभाजित र त्यसपछि खुट्टा बनाउने, align। मुख - अन्त्यमा उच्च मा एउटा सानो भट्ठा-जस्तो कट बनाउन। बिल्कुल ककडी वाह वास्तविक को reminiscent गर्न, कालो currant जामुन आँखा बनाउन। म्याचको स्लाइस उपयुक्त स्थानहरू गर्न खुट्टा र आँखा कस्नु र बन्दागोभी पात मा एक भ्यागुतो राखे। र अर्को एक को होस्ट। बस बच्चा तरकारी खान हुनेछ जब बाहिर, म्याच लिन भूल छैन!
आफ्नो बच्चा शरद ऋतु मा जन्म हुन भाग्यमानी हो भने, विशेष गरी फल को एक किसिम संग संयोजन मा, बाल सदन गरे लागि आफ्नो हातले तरकारी को उपयोगी संरचना हुनेछ। यस्तो "bouquets" बच्चाहरु जन्मदिन देखि व्यवहार रूपमा खान खुसी छन्। तथापि, तपाईं बस सेवा अघि तिनीहरूलाई खाना पकाउन गर्न आवश्यक छ। तपाईंलाई आवश्यक: पातलो काठको skewers, टमाटर र खीरे, स्याउ, प्लम, सुन्ताला, ठूलो अङ्गुर, खरबुजा, cantaloupe, भुईँकटर। सबै उत्पादनहरु राम्रो धुने छन्। खरबुजा, खरबुजा, भुईँकटर, को मज्जा औसत को टुक्रा कटौती। स्याउ स्लाइस मा कटौती। सुन्तला बोक्रा, पनि, खण्डहरूमा विभाजित। अंगूर, को ब्रश हटाउन। खीरे र टमाटर ठूलो सर्कल मा कटौती। को फोम मा स्थान ट्रे। टमाटर संग फूल खीरे, garnish मेयोनेज को थोपा साथ - एक प्लेट मा। skewers मा अंधाधुंध फल मिश्रित nanizhite, र त्यसपछि फोम तिनीहरूलाई स्लाइडमा। फल र तरकारी रचनाहरूको को ट्रे भोजन बच्चाहरु बेला टेबल मा व्यवस्था। र तिनीहरूलाई दिनको लागि नायक संग बधाई!
सहायता कुँद्ने आउँछ
विशेष सौन्दर्य र तरकारी Hack को expressiveness तपाईं कला, वा नक्काशी कटौती मदत गर्नेछ दिनुहोस्। धन्यवाद उहाँलाई, फील्ड, बगैचा र उद्यान को साधारण फल बाहिर, तपाईं वास्तविक masterpieces सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। र तरकारी को संरचना को मूल शीर्षक को लाग्छ। उदाहरणका लागि, "फ्रिगेट आशा" (कच्चा माल - खरबुजा र स्क्वास, बन्दागोभी), "आँखाहरु आकर्षण" (खुर्सानी, गाजर, साग र अजवाइन को फूलगुच्छा), "तरकारी माटो" (कद्दू, zucchini विभिन्न किसिमका), र यति मा। ई। मास्टर को हातमा खरबुजा वा स्याउ फूल रसीला फूल को शरीर भएकोले। विशेष चक्कु पुरातन माटो पोत एक प्रकारको यसलाई गर्नाले, कद्दू कट जटिल डिजाइन छील गर्न अनुमति दिन्छ। र मीठो खुर्सानी को फल स्वादिष्ट Bells परिणत। यो प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईं सफल हुनेछ!
कच्चा माल को एक किसिम सूची, तरकारी artefacts कुरा, हामी wrongly आलु ध्यान भुक्तानी। र, oddly पर्याप्त उहाँबाट, आमा, पनि, रोचक कुरा धेरै सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, एक शानदार piglets बनाउन। मध्यम आकारको आलु, धुन र कोमल सम्म आफ्नो खाल मा फोडा। ले, सुन्दर गरौं। केही गाजर जोश। खुली को तरकारी सफा। गाजर मोटाइ मा सेन्टिमिटर को "पाङ्ग्राहरू" जोडी मा कटौती। यो snouts-stigma हुनेछ। को मिलान आलु तिनीहरूलाई संलग्न। प्रत्येक प्लेट सेट, संग 4-खुट्टा मिलान tuber घुसाउनुहोस्। ककडी "केिकलयिरग" र खाने गर्न छोराछोरीलाई कल बीच फैलाउन!
बच्चाहरु सामान्यतया केले प्रेम। र बच्चा बदमास छ र एक स्वस्थ फल चाहनुहुन्छ छैन भने, के यो ... एक रकेट छ व्याख्या! केरा पील, crosswise आधा कटौती। प्रत्येक आधा कप मा kiwi स्याउ को Windows र ढोका घुसाउनुहोस्। सीधा खेल मा भाग लिन खुसी छ जो आफ्नो बच्चा मुखबाट, मा - रकेट टोलीमा र उडान को शुरुवात संग समाप्त औंल्याए लक्ष्य। यहाँ एक स्वादिष्ट र स्वस्थ कल्पना छ! र हामी जामुन को "तारा" वरिपरि विस्तार भने, बच्चा भिटामिन मिश्रण को एक खुराक प्राप्त हुनेछ कि आफ्नो स्वास्थ्य मा सबैभन्दा सकारात्मक प्रभाव। र मुड।
जाभास्क्रिप्ट, नियमित अभिव्यक्ति उदाहरणहरू नियमित अभिव्यक्ति जाँच
यस समय बेल्ट 2110 16 वाल्व प्रतिस्थापन। 2110: मर्मत
एक sheepskin मा छोराछोरीको जाडो खाम - यो नवजात गरेको दराज को एक आवश्यक विषय
Everflo - ढुवानी, embodying सबै आमाबाबुको विचार